Yakavanzika Policy | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Kubva pane "Mutemo weKuchengetedzwa Kwemashoko Evanhu" wakatanga kushanda zvizere muna Kubvumbi 2005, "Ota Ward Cultural Promotion Association" (ichazonzi "Sangano") inoona kukosha kweruzivo kune vatengi vevanhu., Tichaita zvinotevera.
XNUMX. XNUMX.Chii chinonzi ruzivo rwemunhu?
"Ruzivo rwemunhu" musangano iri rinoreva kune ruzivo rwese rwakanyoreswa pakurodha matikiti, nezvimwe. (Zvikurukuru, ruzivo rwese rwunozivikanwa pamusoro pako, rwakadai sezita rako, kero, nhamba yefoni, nhamba yefakisi, uye ruzivo rweakero yeemail)
XNUMX. XNUMX.Kushandisa ruzivo rwemunhu
Ruzivo rwega rwemutengi rwunopihwa pakutenga tikiti, nezvimwewo, rinoshandiswa pazvinangwa zvinotevera, pamusoro pekuendesa iyo tikiti yaunoda, nezvimwe kwauri uye nekutaurirana nekukurumidza nekuda kwekukanzurwa kwekuita, nezvimwe. ndichaishandisa chete.
Kutumira yakananga tsamba kune vatengi
Kupa akasiyana masevhisi
Kunze kwekunge paine chikonzero chiri chechokwadi (semuenzaniso, kutumira kugadzirisa), isu hatichazvipa kune vechitatu mapato kunze kwevashandi vebhizinesi nevashandi.Uye zvakare, patinotengesa bhizinesi kune wechitatu bato mukati meiyo nhanho inodiwa, isu tinosungira wekunze kuti anyatso gadzirisa ruzivo rwemunhu uye nekurichengeta.
XNUMX. XNUMX.Kuchengetedzwa manejimendi yemunhu ruzivo
Nezve ruzivo rwemunhu wega rwapihwa, isu tichatora matanho anodzivirira ekudzivirira njodzi uye matanho ekuchengetedza kusinga bvumidzwe kuwana, kurasikirwa, kuparadzwa, kunyepedzera, kubuda, nezvimwe.
XNUMX.Sangano / hurongwa / dzidzo
Sangano rinomisikidza mitemo maererano nekubatwa kwemunhu ruzivo, kujekesa munhu anotarisira manejimendi, uye kuchengetedza hurongwa kutevedzera kuchengetedzwa kweruzivo rwemunhu.Uye zvakare, isu tinodzidzisa vashandi vedu nezve kuchengetedzwa kweruzivo rwemunhu uye nekuita kuti vazivikanwe.
XNUMX.Kuzivisa / kururamisa ruzivo rwemunhu, nezvimwe.
Kana mutengi achida kuzivisa kana kugadzirisa ruzivo rwega rwakapiwa, isu tinopindura nekukurumidza mukati meanonzwisisika uye anodikanwa marange.
XNUMX.Kuteerana nemitemo nemirau
Sangano rinoenderana nemitemo nemirau uye zvimwe zvirevo zvine chekuita nekuchengetedza ruzivo rwevatengi.Uye zvakare, isu ticharamba tichiongorora nekuvandudza zviri mukati memutemo uyu.
Ota Wadhi Tsika Yokusimudzira Sangano
146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 1-3 Mukati meOta Citizen's Plaza
9am kusvika 17pm
Mazuva ekuchengetedza uye ekuongorora (Chivabvu 5-Chivabvu 27), kuchenesa kwakavharwa, kwenguva pfupi yakavharwa